32 Belgium | RayHaber | raillynews
Riix dalalka ku yaal khariidada si aad u akhrido warka tareenada ee Belgian, wadada weyn iyo wadada Europe!
Gawaarida Volvo waxay ujeedadoodu tahay inay si weyn hoos ugu dhigaan qiiqa CO2 hawlihiisa saadka iyadoo loo beddelayo qaabka gaadiidka ee u dhexeeya xarumaha waxsoosaarkooda iyo bakhaarada gawaarida cusub ee laga raaco gawaarida oo la dhigo tareennada. Shirkadda ayaa gaar ahaan u heellan sidii loo qaybin lahaa bakhaarradii loo qaybin lahaa iyo ka ganacsashada gawaarida cusub. [More ...]
Qarax ka dhacay saldhig tareen ee magaalada Brussels
Qarax ka dhacay xarunta tareenka ee Brussels: Qof la sheegay inay dileen ciidamada amaanka caasimada caasimada Belgium ee Brussels waxaa dilay ciidamada amaanka oo sida la sheegay lagu qarxiyay Saldhigga Tareenka ee Bartamaha Magaalada Brussels, Belgium. [More ...]
Shil tareen oo ka dhacay Belgium, 1 ayaa ku dhintay 20 dhaawacmay
Shil tareen oo ka dhacay Biljamka, 1 ayaa dhintay 20 oo dhaawacmay: 100 ayaa lagu dilay shilkii 1 ee u dhawaa caasimada Belgium ee Brussels [More ...]
2016 Sanadka Koobka Sawirada CER
Tartanka Sawirka 2016 Sanad CER: Ururka Yurub ee Shirkadaha Tareenka iyo Shirkadaha Kaabayaasha (CER) waxay qabanqaabinayaan '2016 Year CER Photo Contest'. 22 March 2016 ayaa lagu dilay weeraradii argagixiso ee ka dhacay Brussels [More ...]
Qalabka qarxa ee ku yaala magaalada Brussels
Feejignaanta bambaanooyinka ee Brussels… Saldhigga tareenka ayaa laga daad gureeyay: Laba sarkaal oo booliis ah ayaa lagu mindiyey magaalada Brussels, caasimadda Belgium, iyo laba saldhig tareen oo ku yaal magaalada ayaa loo daadgureeyay sababo la xiriira xirmo. Dhacdadu waxay ka dhacday degmada Schaerbeek ee galbeedka galabta. Caloosha iyo luqunta [More ...]
Shaqaalaha waaxda gaadiidka ayaa shaqo joojin ka bilaabanaya Brussels
Shaqaalaha gaadiidka ee shaqo joojinta magaalada Brussels: Magaalada Brussels, ee caasimada Belgium, metro, taraamka iyo basaska magaalada ayaa istaagay shaqo joojinta awgeed. Metro, taraamka Brussels, Belgium [More ...]
Kordhinta talaabooyinka amniga ee saldhigyada metro ee Brussels: Ka dib hawlgalkii argagixiso ee usbuuca dhammaadka ee Beljimka, tallaabooyin adag oo amniga lagu qaadayo ayaa laga qaadayaa saldhigyada metrooga ee caasimadda, Brussels. Magaalada caasimada ah kadib howl galkii argagixiso ee Belgium [More ...]
Argagax argagax leh wadnaha Yurub! Saldhigga tareenka ayaa laga daad gureeyay: Saldhigga dhexe ee tareenka ee caasimadda Biljimka ee Brussels ayaa loo daadgureeyay laba shandadood oo la tuhunsan yahay. Saldhigga dhexe ee tareenka ee caasimada Belgium, Brussels, ayaa loo xiray sababo la xiriira shandadaha laga shakiyo. boorsooyinkooda [More ...]
Qalabka cayaaraha ee laga helo bacaha shaki laga qabo ee Antwerp, Belgium
Biljamka, xarunta tareenka Antwerp ee laga shakisan yahay oo laga saaray qalabka isboortiga: kooxaha la-dagaallanka argagixisannimada ee Beljim ayaa ku sugnaa maalmihii 2 ee la soo dhaafay kuwa looga shakisan yahay weerarro argagixiso oo ka dhacay hawlgallo badan oo ka dhacay xarunta, hawada argagaxa badan ee dalka oo aan sal iyo raad lahayn. [More ...]
Sababta keentay shil tareen ee Beljamka wuxuu noqon karaa weerarka iftiinka (Video)
Shil tareen oo ka dhacay Belgium ayaa laga yaabaa inay sababaan iftiimayaasha tareenka ee tareenka: 3, oo uu ku jiro injineerka tareenka rakaabka, ayaa la dilay markii tareen rakaab ah oo u socdaalay Liege-Namur ee bariga Belgium ku dhuftay tareen xamuul ah. [More ...]
Boosaaso ayaa shil tareen uu qaaday saddex qof
Shilka tareenka ee Beljimka wuxuu qaaday saddex nafood: shil habeen hore ka dhacay gobolka Saint-Georges-Sur-Meuse, tareen rakaab ah ayaa ku hor dhacay tareenka xamuulka ee isaga ka horreeya. Dhacdadu waxay dhacday habeenkii Axada ee biyaha 23.00 waqtiga maxalliga ah. [More ...]
Eurostar, oo ka shaqeysa tareenka xawaaraha sare ee u dhaxeeya England iyo Faransiiska, waxay ururiyaan Euro 2016 (Video)
Eurostar, oo ka shaqeeya tareenno xawaare sare leh oo udhaxeeya Boqortooyada Midowday iyo Faransiiska, ayaa soo ceshan doona iyadoo loo mahadcelinayo Euro 2016: Eurostar waxay ku shaqeysaa tareeno xawaare sare leh oo udhaxeeya Boqortooyada Ingiriiska iyo France iyo Belgium. [More ...]
Saldhiga mitirka Maelbeek dib baa loo furay markii 32 uu dhintay
Saldhigga tareenka ee Maelbeek, halkaas oo qofkii lagu dilay 32, dib loo furay: xarunta tareenka dhulka hoostiisa ee Maelbeek, oo u dhow xarumaha Midowga Yurub ee bartilmaameedsaday weerarada argagixiso ee caasimadda Biljimka ee Brussels, ayaa dib loo furey bil kadib. Subax hore [More ...]
Eurostar waxay joojisay tareenada oo dhan magaalada Brussels
Eurostar ayaa baajisay dhammaan tareenada tagi jiray Brussels: Yurub ayaa naxdin gelisay ka dib weeraro is daba joog ah oo ka dhacay caasimada Belgium, Brussels. Wadamo badan, intii miiska dhibaatada la abuuray, dowlada faransiiska iyo Ingriiska waxay isu soo ururiyeen si aan caadi aheyn. [More ...]
Digniin ku filan oo ku saabsan safarka tareenka Paris-Brussels
Digniinta xirmada shakiga leh ee saaran tareenka Paris-Brussels: Qaylo dhaan ah xirmada baakadaha ayaa laga soo sheegay duullimaadyada tareenka Paris-Brussels. 3 qof ayaa ku dhintey 34 qaraxyo kala duwan oo ka dhacay Brussels subaxnimadii hore [More ...]
Qarax ka dhacay magaalada Brussels ee Maelbeek Metro
Qarax ka dhacay Meelbeek Metro ee Brussels: Ka dib qaraxii mataanaha ee ka dhacay garoonka diyaaradaha ee caasimada Belgium ee Brussels, qarax ayaa ka dhacay wadada tareenka. Qaraxa, dadka 20 ayaa la dilay iyo 55 dad ayaa ku dhaawacmay. Caasimadda Belgium [More ...]
Kadib qaraxii ka dhacay Yurub, gaadiidkii hawada iyo tareenka ayaa la yareeyay: Maamulka gaadiidka ee Brussels ayaa barta ay ku leedahay barta rasmiga ah ee twitter-ka waxay ku sheegtay in garoonka la daadgureeyay iyo in dadka safraya ay ka fogaadaan garoonka diyaaradaha. Warbixinta TV-ga Beljimka ah ee RTL [More ...]
Wuxuu la galay baabuurka tareenka dhulka hoostiisa ah isaga iyo gaarigiisii ​​oo xidhay gaadiidkii: Muwaadin Biljim ah ayaa galay xarunta tareenka dhulka hoostiisa ee gaadhigiisa Range Rover. Markii giraangiraha gaadhigiisu ku dheceen biraha dhexdooda, taraafikada tareenka ayaa curyaamisay. Duullimaadyada 3,4 iyo 51 [More ...]
Shaqo joojinta ka dhacday Beljimka waxay hakisay howlihii tareenka: Shaqo-joojinta darteed, duullimaadyadii gudaha ee ka socdey Brussels inta badan waa la hakiyay, duullimaadyadii caalamiga ahaana gabi ahaanba wey joogsadeen. Waxaa la bilaabay iyada oo laga jawaabayo qorshaha dhimista miisaaniyadeed ee shaqaalaha tareenka ee Belgium [More ...]
Shaqaalaha tareenka ee weerarka Belgium
Shaqaalaha Tareenka ee Biljimka shaqo joojinta: Shaqaalaha tareenka ayaa ka falceliyay xirmada dib-u-habeeynta ee dowladda ee u kuurgalaysa miisaaniyad dhimis shaqo saacad-48-saac. Shaqaalaha tareenka ee Beljamka oo ka jawaabaya xirmada dibuhabaynta dawladda, oo saadaalineysa dhimista miisaaniyada, [More ...]
Erkeskin, Belgium Vlaamse Gobolka Iskaashiga iyo Investment Seminar in Wadahadalada: Guddiga Xidhiidhka Dibadda Dhaqaalaha (DEIK) Turkey - Golaha Business Belgium-Turkey, by Gobolka Vlaamse iyo Investment Iskaashiga Seminar abaabulay oo lagu qabtay Istanbul. [More ...]